burmamuslim | Burma Muslim
Author Archive: burmamuslim
By burmamuslim on January 14, 2015 | Leaveacomment
တင်ထက်ပိုင်| January 12, 2015 | |
ရေသန့် ဘူးကြီးများ လိုက်လံ ပို့ဆောင်နေသည့် ကားတစီးကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – မင်းထက်စံ / ဧရာဝတီ)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိသော ရေသန့်ဘူးခွံများတွင် လူ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက် စေနိုင်သော ဒြပ်စင်တချို့ ပါဝင် လျက် ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးသုတေသန ဦးစီးဋ္ဌာန (အောက်မြန်မာပြည်) ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် ၄၃ ကြိမ်မြောက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ညီလာခံ တွင် တင်သွင်းဖတ်ကြားခဲ့သည့် သုတေသန စာတမ်းတစောင်တွင် အထက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် သောက်ရေသန့်ဘူးများကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲနိုင်မှုနှင့် အန္တရာယ် ရှိနိုင်မှုတို့ကို သိရှိစေရန် အပြင် ရေသန့် ဘူးခွံများ၏ အမျိုးအစားများ ခွဲခြား သတ်မှတ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့အတွင်းတွင် ပါရှိသည့် ဒြပ်စင်များကို တိုင်းတာရန် ရည်ရွယ်၍ ယင်းသုတေ သန ကို ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သုတေသန စာတမ်း တွင် ဖော်ပြထားသည်။
သုတေသန တွေ့ရှိချက်များအရ ရွေးချယ် စမ်းသပ်ခဲ့သော ရေသန့်တံဆိပ်များ အားလုံး၏ ဘူးခွံများမှာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးမှု ဆိုင်ရာ မူဝါဒအရ အစားအသောက်နှင့် သောက်ရေများ ထုတ်ပိုးရန်အတွက် ယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည့် ပေါ်လီမာ (Polymer) ဒြပ်ပေါင်း ဖြစ်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း လူ၏ ကျန်းမာ ရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ဒြပ်စင်များ ဖြစ်သည့် အလူမီနီယံ ဒန်သတ္ထု၊ တိုင်တေ နီယမ် သတ္ထု၊ ရိုဒီယမ် သတ္ထုနှင့် ခဲသတ္ထုတို့ ပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း ယင်းစာတမ်းက ဆိုသည်။
ယင်းကိစ္စကို အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဋ္ဌာန (FDA) သို့ တင်ပြထား သော်လည်း မည်သည့် ရေသန့် တံဆိပ်များ၏ ဘူးခွံများကို ရွေးချယ် စမ်းသပ်ထားကြောင်း ကြေညာခြင်း မရှိသေးပါ။
ဆေးသုတေသန ဦးစီးဋ္ဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှုး ဒေါက်တာဝင်းအောင်က “ဆရာတို့ ရရှိတဲ့ အဖြေတွေကို FDA ကို ပေးတယ်။ FDA ကမှ သူတို့ အပေါ်က လူကြီးတွေနဲ့ ညှိပြီးတော့ ကျန်းမာရေး မူဝါဒ ချမှတ်တဲ့သူတို့၊ အခွင့်အာဏာ ရှိတဲ့သူတို့နဲ့ ညှိပြီးတော့ ဒါတွေကို အရေး ယူတာ၊ အသိပေးတာ၊ ဈေးကွက်က ပြန်သိမ်း တာတွေ လုပ်ခိုင်းမှာပေါ့။ အဲဒါကတော့ သူတို့အပိုင်းပါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် သောက်ရေသန့်ဘူးများကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြသော်လည်း သောက်ရေသန့်ဘူးများနှင့် ပတ်သက် သည့် ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတမှာ နည်းနေသေးကြောင်းလည်း မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးအသင်း (ဗဟို) မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးကိုကိုနိုင် က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ရေသန့်ဘူးကို နေပူထဲမှာ အမိုးအကာ မရှိဘဲ ထားရင် ပလတ်စတစ်မှာပါတဲ့ ဓာတ်က ရေနဲ့တွေ့ရင် ဓာတ်ပြုတဲ့ သဘောတရား ရှိတယ်။ စားသုံး သူတွေက ဒါကိုမသိဘဲ သုံးစွဲလာတဲ့ အခါကျရင် ရေရှည်မှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်တတ်တယ်” ဟု ဦးကိုကိုနိုင် က ပြော သည်။
Ever Purified Water ရေသန့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ဦးဟန်သန်းလွင်က ၎င်းတို့ အသုံးပြုသော ရေသန့် ဘူးခွံများ သည် စက်ရုံထုတ် များ ဖြစ် ပြီး ရေသန့်လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ကို FDA မှ ၂ နှစ် တခါ လာရောက် စစ်ဆေးသည်ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဦးဟန်သန်းလွင်က “ရေသန့် ဘူးခွံတွေကတော့ စက်ရုံက မှာပြီး သုံးတာ။ သူတို့ ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်း သုံးတယ်။ ၂ နှစ် တခါတော့ FDA က လာလာစစ်တယ်။ ဒီကြားထဲလည်း ရှောင်တခင် သဘောမျိုးတော့ လာလာစစ်တတ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
၎င်းတို့အနေဖြင့် ရေသန့်ဘူးကြီးများကို ရေလဲလှယ်ရာတွင်လည်း အနံ့လွတ် ဆပ်ပြာမှုန့်နှင့် ဘူးခွံ၏ အပြင်ကို ဆေးကြောပြီး အတွင်းပိုင်း ကို ကလိုရင်း ဖျော်ထားသော ရေနှင့် ဆေးကြောသည်ဟု ဆိုသည်။
အမေရိကန် ဗဟို စစ်ဌာနချုပ် နဲ့ ဆိုနီ ရုပ်ရှင် ကုမ္ပဏီ ကို ဆိုင်ဘာ အင်တာနက်က တိုက်ခိုက်မှု တွေ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဆိုင်ဘာ လုံခြုံရေး ပိုမို တင်းကျပ် ဖို့ အစီအစဉ်သစ် တွေကို သမ္မတ အိုဘားမားက ကြေညာ လိုက်ပါတယ်။
ဒီ အရေးပေါ် တိုက်ခိုက်မှု တွေဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံကို အန္တရာယ် ပေးနိုင်မှု ပိုကြီးထွား လာနေတာမို့ ဆိုင်ဘာ ရာဇဝတ် သမား တွေကို စုံစမ်း စီရင်ဖို့ ဥပဒေ ဘက်တော်သား တွေမှာ အာဏာတွေ ပိုလိုအပ် နေတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
အစိုးရ ဌာန တွေကို သတင်း အချက်အလက်တွေ ပိုပေးဖို့၊ ဆိုင်ဘာ ခြိမ်းခြောက်မှု ကြုံရ ကြောင်း အကြောင်းကြား တဲ့ စီးပွားရေး လုပ် ငန်း တွေကို ဥပဒေ အရ ကာကွယ် ပေးဖို့ ဆိုတဲ့ အစီအစဉ် တွေကို ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါတယ်။
အချက် အလက် စုဆောင်းမှုတွေကြောင့် ပုဂ္ဂလိက အခွင့်အရေးတွေ ထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်တဲ့ အတွက် ဒီပြုပြင်ရေး တွေ လုပ်ဖို့ အရေးမှာ ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်က ဟန့်တားခဲ့ဖူးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
By burmamuslim on January 13, 2015 | Leaveacomment
မန္တလေး ဇန်နဝါရီ ၇
ချက်လက်မှတ်ပေါ်တွင် လက် မှတ်အတုထိုးပြီး ငွေကျပ်သိန်း ၂၅ဝဝ ကို လိမ်လည် ထုတ်ယူသွားသူ ဦးအောင်ကိုလတ်နှင့် ဧရာဝတီ ဘဏ်လီမိတက် မန္တလေးဘဏ်ခွဲ(၆) မန်နေဂျာ ဦးမြင့်ဇော်ဦးတို့ကို ဇန်န ဝါရီ ၆ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲက အရေးယူပေးပါရန် မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၅၇ လမ်းနှင့် ၅၈ လမ်းကြား မနော်ဟရီလမ်းနှင့် နှင်းဆီလမ်းကြား ဖ-၃/၈၆ နေ ဒေါ်ဆွေဆွေလွင် (ဒေသဆိုင်ရာ ဒုတိယမန်နေဂျာ၊ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိ တက်)က တိုင်တန်းကာ ချမ်းအေး သာစံမြို့နယ် မြို့မရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့် ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဧရာဝတီဘဏ် လီမိ တက်ဘဏ်ခွဲ(၆)တွင် စာရင်းဖွင့်ထား သူ ဒေါ်ယဉ်လဲ့က ၄င်း၏ ချက် လက်မှတ်တစ်ရွက် ပျောက်ဆုံးနေ သည့်အတွက် ဘဏ်စာရင်းတွင် တိုက် ဆိုင်စစ်ဆေးသည့်အခါ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၄ ရက်တွင် အဆိုပါ ချက်လက် မှတ်ဖြင့် ဦးအောင်ကို လတ် က ငွေ ထုတ်ယူသွားခဲ့ကြောင်း၊ ချက်လက် မှတ်ပေါ်တွင်ပါရှိသည့်လက်မှတ်မှာ ၄င်း၏ လက်မှတ် မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုသည့် အပြင် ငွေထုတ်သူ ဦးအောင်ကိုလတ်ကိုလည်း သိရှိနိုင် ခြင်းမရှိကြောင်း ပြောပြချက်အရ တရားလိုက ဧရာဝတီဘဏ် လီမိ တက် ရုံးချုပ် သို့တင်ပြပြီး စိစစ်ရာ ချက်လက် မှတ်ငွေကိုထုတ်ယူသူမှာ ဦးပြည့်ဖြိုး အောင်၏ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ဖြင့် ယာဉ်မောင်း လိုင်စင် ပြု လုပ်ခဲ့ သူ ဦးအောင်ကိုလတ်က ထုတ်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ချက်လက်မှတ်မှာ ဧရာ ဝတီဘဏ်လီမိတက်(၆)မှ ချက်လက် မှတ်ဖြစ်သော် လည်း ချက်လက်မှတ်ပါ ငွေကို ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်(၅)မှ ထုတ်ယူသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်ယဉ်လဲ့၏ ဘဏ်စာရင်း တွင် ငွေ များ ရှိကြောင်း ကို မန္တလေးဘဏ်ခွဲ(၆) တာဝန်ရှိသူများသာ သိရှိနိုင်သဖြင့် ဘဏ်ရုံးချုပ်တွင် သံသယရှိသူ မန်နေဂျာ ဦးမြင့်ဇော်ဦး အား ခေတ္တ တွဲဖက် ထားရာမှ ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်သွားခဲ့ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါ သဖြင့် ငွေလိမ်လည်ထုတ်ယူသူ ဦးအောင်ကိုလတ်၊ မန်နေဂျာ ဦးမြင့် ဇော်ဦးနှင့် အခြားပူးပေါင်းကြံစည် သူများကို အရေးယူပေးပါရန် တိုင် တန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပုံ ၁- ဈေးဝယ်သူများအား ဘေးလွတ်ရာတွင် ၀ှက်ထားပေးခဲ့သူ မွတ်စလင်လူငယ် ဘာသီလီ
ပုံ ၂- စူပါမားကတ် စီးနင်းမှုမှ လွတ်မြောက်လာကြသူများ
– ပြင်သစ်သတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ Charlie Hebdo ရဲ့ ပဲရစ်က ရုံးခန်းကို သေနတ်သမားတွေက ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် မှာ ပဲရစ်က Porte de Vincennes ဒေသ ဂျူးရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ Hyper Cacher စူပါမားကတ်ကို သေနတ်သမားတစ်ယောက်က ၀င်ရောက် စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။
စီးနင်းတဲ့သူက အေမီဒီ ကောင်လီဘလီဆိုသူ ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သတင်းစာတိုက် တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ အကြပ်ကိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဲတပ်ဖွဲ့က အဲဒီ စူပါမားကတ်ကို ၀င်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး သေနတ်သမားကို ပစ်သတ်နိုင် ခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဓားစာခံလေးယောက် သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ သူတို့ စီးနင်းမှုမတိုင်ခင် မှာ သေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်တယ် လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီစီးနင်းမှုမှာ ဈေးဝယ်သူအချို့ကို ဘေးလွတ်ရာမှာ ဖွက်ထားပေးခဲ့ပြီး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အပြင်ထွက်လာကာ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို အဖိုးတန် သတင်းတွေ ပေးခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက် ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါကတော့ မာလီနွယ်ဖွား အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် လက်စ်စနာ ဘာသီလီလို့ခေါ်တဲ့ မွတ်စလင်လူငယ်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီစူပါမားကတ်က ၀န်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဘာသီလီဟာ သေနတ်သမား စူပါမားကတ်ထဲ ၀င်လာတဲ့အခါမှာတော့ သူရဲ့ ဆက်ရှင် မှာရှိတဲ့ ဈေးဝယ်သူ အယောက် ၂၀ လောက်ကို အအေးခန်းထဲခေါ်ပြီး ဖွက်ထားခဲ့ပါတယ်။
`သူတို့ပြေးဝင်လာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်ဟာ အအေးခန်းတံခါးကို ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ လူတော်တော်များများက ကျွန်တော့် ဆီ ပြေးဝင် လာကြတာပါ။ ကျွန်တော် မီးပိတ်လိုက်တယ်။ အအေးခန်းခလုတ်ကိုလည်း ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အအေးလျှော့ လိုက်တယ်။ လူတွေကို အထဲထည့်လိုက်တယ်။ တံခါးကိုပိတ်လိုက်ပြီး သူတို့ကိုလည်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေပါလို့ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပါတယ်´ လို့ သူ့ ရဲ့ ကယ်တင်မှုအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာသီလီက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘာသီလီရဲ့ ကယ်တင်မှုကြောင့် ဈေးဝယ်သူတွေဟာ အသက်အန္တရာယ်ကနေ လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး အခြေအနေတွေအားလုံး တည်ငြိမ် သွားတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့တွေက ဘာသီလီကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လာရောက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့မွတ် စလင် သူရဲကောင်း ဘာသာလီရဲ့ ဓာတ်ပုံဟာလည်း ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ တစ်မဟုတ်ချင်း ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။
ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ပဲရစ်မြို့မှာ သေနတ်သမားတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှု ၂ ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က သတင်းစာတိုက် တိုက်ခိုက်မှု က တော့ တမန်တော်မိုဟာမက်ကို လှောင်ပြောင်သရော်တဲ့ ကာတွန်းတွေ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့အတွက် လက်တုံ့ပြန်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ယူဆ ရပါ တယ်။
အဲဒီတိုက်ခိုက်မှု အတွင်းမှာလည်း မွတ်စလင်သူရဲကောင်းတစ်ဦး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး သူကတော့ လူ့အသက်တွေကို ကာကွယ် ဖို့ကြိုး စားရင်း သေနတ်သမားတွေရဲ့ ပထမဆုံး ပစ်သတ်မှုကို ခံခဲ့ရတဲ့ မွတ်စလင်ရဲအရာရှိ မီရာဘတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ညတော့ အိုဘားမားနဲ့ မစ်ရှဲလ် တို့ဟာ အဆောင်အယောင် အခမ်းအနားမပါပဲ ညစာစားဖို့ အပြင်ထွက်လာပါတယ်။ မထင်မရှား သာမန် ဆိုင်ကလေး တစ်ခုမှာပေါ့။ စားသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင်ဟာ အိုဘားမားထံကို ခွင့်တောင်းပါတယ်။ အိုဘားမားရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မစ်ရှဲလ် နဲ့ နှစ်ဦးတည်း စကားပြောချင်လို့ပါတဲ့။ မစ်ရှဲလ် ကလည်း လက်ခံတယ်ဆိုတော့ အိုဘားမားကလည်း လက်ခံလိုက်ပါတယ်။
တစ်အောင့်လောက်နေကျတော့ မစ်ရှဲလ် ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ စပ်စုချင်တဲ့ အိုဘားမားက သူ့ကို မေးတယ်။ ဘာတွေများ ပြောခဲ့ကြ လဲပေ့ါ။ ဘာကြောင့် လိုက်သွားတာလဲပေါ့။ ဒါနဲ့ မစ်ရှဲလ် က ပြောပြပါတယ်။ “သူက တစ်ချိန်တုန်းက ကျွန်မကို ပိုးပန်းခဲ့တဲ့သူလေ။ ကျွန်မ လက် မခံခဲ့ပါဘူး”
ဒါနဲ့ အိုဘားမားက ပြောပါတယ်။ “မင်းဘာလို့ သူ့ကို လက်မခံခဲ့တာလဲ။ မင်းသာ သူ့ကို ရွေးရင် ဒီအချိန်မှာ ဟောဒီ စားသောက်ဆိုင် လှလှလေးရဲ့ ပိုင်ရှင်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်နေလောက်ပါပြီပေါ့”
မစ်ရှဲလ် က ပြန်ဖြေပါတယ်။
“ဘယ်ဟုတ်မလဲရှင်. ကျွန်မသာ သူ့ကို ရွေးခဲ့ရင် ဒီအချိန်မှာ သူဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတ ဖြစ်နေလောက်ပြီပေါ့…”
အချို့သော အောင်မြင်တဲ့ ယောင်္ကျားတွေရဲ့ အနာက်မှ ထူးချွန်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ပြီး ရဲဝံ့တဲ့ အမျိုးသမီးများ ရှိနေတတ်ပါတယ်။
Sometimes it’sawoman that makesaman who he is.
Ref: Dato Geethanjali G
လတ်တလော ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တ၀ိုက်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းအချို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာများကြောင့် အောင်မင်္ဂလာဒုက္ခသည်စခန်းသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးနေသည့် ရိက္ခာ ယာဉ်အား ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
အဆိုပါ ရိက္ခာယာဉ်အား ဒေသခံများက ဈေးကားဟု ခေါ်ဆိုကြကာ ရိက္ခာဝယ်ယူရန် လူ ခြောက်ဦး လိုက်ပါကြရပြီး လုံခြုံရေးအစောင့်အကြပ်များဖြင့် စစ်တွေမြို့မဈေးသို့ တစ် လနှစ်ကြိမ် ခန့် သွားရောက် ၀ယ်ယူကြရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သြဂုတ်လ (၉) ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သော လုံထိန်းများ၏ မွတ်စလင်မ်ဒုက္ခသည်များအား အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်များနောက်ပိုင်း ယနေ့အခါတွင် ယင်း ဈေးကားအား သွားခွင့် မပေးတော့ ဘဲ ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အင်တာနက် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာအချို့တွင် ရခိုင်အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်များနှင့် အကြမ်းဖက်မှု ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် လှုံ့ဆော်နေသူများက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရှိ ဒေ သခံ မွတ်စလင်မ်များအား (စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး) ဖြတ်လေးဖြတ် စီမံကိန်းများ ချမှတ်၍ လုပ်ကိုင်သွားကြရန်အတွက် တိုက်တွန်းရေးသားမှု များ ပေါ်ထွက် လာပြီးနောက်ပိုင်း ယခုကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်များ ပေါ်ပေါက်လာနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဒါတွေက မကြာမကြာ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင် ကျနော်တို့ စခန်းရဲ့ ဈေးကားကို ပိတ်လိုက်တယ်။ ရမ္မသွာန် ဥပုဒ်လကဆိုရင် ပိတ်လိုက်တော့ ကြက်ဥတစ်လုံးကို ၈၀၀ ပေးတာတောင် ၀ယ်မရတော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ လုံခြုံရေးအရ ပိတ်တယ်လို့ အစောင့်တွေက ပြောပေမယ့် ခဏခဏဖြစ်နေတာက မကောင်းဘူးပေါ့။ အခုဆို ကျနော်တို့ဆီမှာ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး၊ နောက် ဘာမှလည်း မသိကြပေမယ့် ဈေးကားပိတ်ပြီဆိုရင် တစ်ခုခု ဖြစ်နေလို့၊ ဒါမှမဟုတ် အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ယောက် လာမယ်ဆိုတာ ဒီကလူတွေက ခန့်မှန်းတတ်ကြပြီ” ဒေသခံတစ်ဦးက အလင်းမျက်ဝန်းစီဂျေထံမှတဆင့် ပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုကဲ့သို့သော ဖြစ်စဉ်များဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့အပြားတွင် မကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေကြကိစ္စဖြစ်နေပြီး အဓိကအားဖြင့် အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်ပါတီတစ်ခုဖြစ်သော RNDP ပါတီနှင့် ရခိုင်ပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အချို့၏ ဦးဆောင်စေခိုင်းမှုသာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း လေ့လာသူများကတော့ စွပ်စွဲပြောဆိုနေကြပါတယ်။
By burmamuslim on January 8, 2015 | Leaveacomment
– ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်ခုံရုံး ICC သို့ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ၀င်ရောက် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်လိ့မ်မည်ဟု ကုလသမ္မဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်က ပြောကြားလိုက်သည်။
နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်ခုံရုံးသို့ ၀င်ရောက်ရန်အတွက် နောက်ဆုံးအဆင့် ဆောင်ရွက် မှုအဖြစ် ICC ၏ အခြေခံမူဖြစ်သည့် ရောမ သဘောတူညီချက်တွင် လက်မှတ် ထိုးခွင့်ရရေး ပါလက်စတိုင်း၏ လျှောက်လွှာကို ပြီးခဲ့သည် သောကြာနေ့က တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုကဲ့သို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ယမန်နေ့ညပိုင်းက ကုလသမဂ္ဂ ၀ဘ်ဆိုက်တွင် ဘန်ကီမွန်က `ရောမ သဘော တူညီချက်ဟာ ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံအပေါ် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး သက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်´ ဟု ရေးသားဖော်ပြထားပြီး အဆိုပါ စာရွက်စာတမ်းများ အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အတွက် မိမိအနေဖြင့် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ICC သို့ဝင်ရောက်ရန် ပါလက်စတိုင်း၏ ကြိုးစားမှုအတွက် လက်တုံ့ပြန်သွားမည် ဟု အစ္စရေးက ခြိမ်းခြောက်ထားပြီး၊ အမေရိကန် ကလည်း ထိုဆောင်ရွက်မှုမှာ အစ္စရေး-ပါလက်စတိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို အတားအဆီးဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်ခုံရုံးနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရပြီးနောက် ပါလက်စတိုင်းမှာ အစ္စရေး၏ စစ်ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် တရားစွဲဆိုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Ref : http://www.aljazeera
ပေါ့ပ်အဆိုတော် ဆလီနာဂိုမက်ဇ်သည် မွတ်စလင် အမျိုးသမီး ဝတ်စုံဖြင့် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူး ခဲ့ပြီးနောက် ခြေမျက်စိဖော် ထားသော အဆိုပါ ဓာတ်ပုံကို လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ အန်စတာဂရမ်တွင် တင်ခဲ့ရာ ဝေ ဖန်မှုများထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းကြောင့် ယင်း ဓာတ်ပုံကို ပြန်ဖြုတ်လိုက်ကြောင်း ဒေးလီး မေးလ်သတင်း ဌာနက ယနေ့ဖော်ပြထား သည်။
မွတ်စလင်ဘာသာရေး ထုံးစံအရ မွတ် စလင် အမျိုးသမီး အနေဖြင့် အဆိုပါ ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ရာတွင် ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး လုံခြုံစွာ ဝတ်ဆင်ရကြောင်း သိရသည်။ ဆလီနာဂိုမက်ဇ်သည် အာရပ်စော်ဘွား များနိုင်ငံ(ယူအေအီး)သို့ အလည်အပတ်သွား ရောက်ရင်း အဆိုပါ ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရိုက်ကူးခဲ့သည့် နေရာမှာ ယူအေ အီးရှိ ဗလီတစ်ခုတွင် ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
ထို့အပြင် ဆလီနာဂိုမက်ဇ်သည် ယူ အေအီးနိုင်ငံသို့ သွားရောက်စဉ် အခြားသော ဂီတသမားများ ရုပ်သံတင်ဆက်သူများဖြစ် သည့် ကန်ဒဲဂျန်နာ၊ ဂျီဂျီဟာဒစ်၊ ကိုဒီဆမ် ဆမ်၊ ရှေးမစ်ချယ်လ်တို့နှင့်အတူ မွတ်စလင် အမျိုးသမီးဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်၍ အုပ်စုလိုက် အမှတ်တရဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ကူးကာ အင်စ တာဂရမ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယူအေအီးနိုင်ငံရှိ ဗလီများတွင် အလည် အပတ်လာရောက်သူများအနေဖြင့် လိုက်နာ ရန် စည်းကမ်းများသတ်မှတ်ထားပြီး အမျိုး သားနှင့် အမျိုးသမီးများ လက်ချင်းချိတ်၍ မသွားရန်၊ ဗလီထဲတွင် အနမ်းမပေးရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ ဘာသာရေးဝတ်စုံဝတ်ဆင် ရာတွင် ခြေမျက်စိ မပေါ်ရန်တို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ဆလီနာဂိုမက်ဇ်၏ ခြေမျက်စိဖော် ထားသည့်ဓာတ်ပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘာသာ ရေး အဆောက် အအုံကို ပန်းခြံကဲ့သို့ နောက် ပြောင်စရာနေရာမဟုတ်ကြောင်း၊ လေးစားမှု ရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း မှတ်ချက်များပေးသူ များရှိခဲ့သည်။
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင်လည်း R & B အဆို တော်ရီဟားနားသည် အဆိုပါဗလီ၏ ပြင်ပ တွင် အမူပိုသည့် ဟန်ပန်များဖြင့် ဓာတ်ပုံ ရိုက် ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဗလီတာဝန်ရှိသူများက နှင်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။ T 1 P (Ref : Daily Mail)